Home News Ururka Al Shabaab oo saddex ruux ku dilay Degaanka Mubaarak
Wararka ka imaanaya deegaanka Mubaarak ee Gobalka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in Al-shabaab ay saddex qof shalay ay ku toogteen Goob fagaare ah oo ku taalla deegaankaasi.
Dadka ay dileen shabaab ayaa waxaa ay ku eedeeyeen in ay yihiin Askar iyo Ergo ka qeybqaadatay soo xulista Baarlamaanka Soomaaliya.
Nabadoonka la toogtay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamad Tifow Xaydar, waxaa ayna Shabaab sheegeen in uu soo xulay xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Sidoo kale Al-shabaab ayaa waxaa baahiyeen Magacyada Askarta la toogtay, kuwaasi oo lagu kala magacaabo Mahad Cabdullaahi Abuukar oo ahaa 29 jir, islamarkaana ka mid ahaa Milatariga Soomaaliya ,sidoo kale Maxamuud Faarax Aadan oo 28 sano jir ka shaqeynayay degaanka Shalambood ay toogteen shabaab.
Previous articledhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemaayo Gobolka Sh/hoose
Next articleDowladda Faransiiska oo hub ay ka qabatay xeebaha Soomaaliya ku wareejisay Dowladda Afrikada Dhexe
Ciidamada Booliska oo howlgalo kawada Magaalada Baladweyne